ခုလိုကာလမှာ အမှန်တကယ် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ အနှေးယာဉ်မောင်းနှင်သူ အယောက်(၃၀)အား ဆန်၊ ဆီစတဲ့စား ယောက်ကုန်များ လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Cele Oscar
ခုလိုကာလမှာ အမှန်တကယ် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ အနှေးယာဉ်မောင်းနှင်သူ အယောက်(၃၀)အား ဆန်၊ ဆီစတဲ့စား ယောက်ကုန်များ လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
April 26, 2021 By L YC Celebrity
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..မင်းသမီး ချောလေးခိုင်နှင်းဝေဟာ ဆိုရင် လက်ရှိမှာ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ရပ်နားထားပြီး ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို အာရုံစိုက်ပြီး ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူတစ်ဦး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေ က ခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးခြေအနေ တွေကြောင့် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကို သူမတတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်း နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ဒီလိုခက်ခဲ နေတဲ့ကာလမှာတောင် ခိုကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ပေးပြီး သူတို့လေးတွေကိုအစစ အရာရာ ဂရုစိုက်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတာကိုလည်း လေးစားစွာ နဲ့တွေ့မြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုကာလမှာ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန်ရည် ရွယ်ပြီး လှူဒါန်းမှုတွေကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ပရဟိတမင်းသမီးလေးဆိုတဲ့အတိုင်း နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကို ပရဟိတ စိတ်အပြည့်အယရှိတဲ့အတွက် သူမကို ပရိတ်သတ် တွေက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လေးစားရင်းအချစ်တွေပိုနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ဒီကနေ့ မှာဆိုရင်လည်း ခိုင်နှင်းဝေက ဆန်၊ဆီ၊ကြက်သွန်စတဲ့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အနှေးယာဉ်အစီး (၃၀)အား လှူဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။” ဆိုက်ကား အစီး (၃၀) အား ဆန်(၅)ပြည်၊ ဆီ(၅၀)သား၊ ကြက်သွန်၊အာလူး၊ငါးခြောက်၊ဂေါ်ဖီထုပ်၊အားဆေး တို့ကို ဝေမျှ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်..ဂေဟာ အတွက် ဝယ်စု ထားတဲ့ ပစ္စည်းများနှင့် အလှူရှင်များ လာရောက်လှူဒါန်းထားသော ပစ္စည်များအား ရှိသလောက် ထုတ်၍ ပြန်လည်လှူဒါန်းပေးသွားပါမည်.
.ခုနှစ်ရက် သားသမီး အလှူရှင်များ အားလုံး ထပ်တူ ကုသိုလ်ပွား များနိုင်ကြပါစေရှင်…🙏🙏🙏….” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိတ်သတ် ကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ခုလိုအခက်အခဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ သူတွေကို လှူဒါန်းပေေးနတဲ့ခိုင်နှင်းဝေကို တကယ်ကိုလေးစားမိတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
Source ; Khine Hnin Wai’s Facebook Page
ပရိတျသတျကွီးရေ..မငျးသမီး ခြောလေးခိုငျနှငျးဝဟော ဆိုရငျ လကျရှိမှာ အနုပညာ အလုပျတှကေို ရပျနားထားပွီး ပရဟိတ လုပျငနျးတှကေို အာရုံစိုကျပွီး ကွိုးစားလုပျဆောငျနတေဲ့ သူတဈဦး ပဲဖွဈပါတယျ။ခိုငျနှငျးဝေ က ခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးခွအေနေ တှကွေောငျ့ အခကျအခဲ ဖွဈနကွေတဲ့ ပွညျသူတှကေို သူမတတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျး နတောပဲဖွဈပါတယျနျော.။
ဒီလိုခကျခဲ နတေဲ့ကာလမှာတောငျ ခိုကိုးရာမဲ့နတေဲ့ ရငျသှေးငယျလေးတှကေို ချေါယူစောငျ့ရှောကျပေးပွီး သူတို့လေးတှကေိုအစစ အရာရာ ဂရုစိုကျပွုစုပြိုးထောငျပေးနတောကိုလညျး လေးစားစှာ နဲ့တှမွေ့ငျရတာပဲဖွဈပါတယျ။ခုလိုကာလမှာ အခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ စားဝတျနရေေးအဆငျပွစေရေနျရညျ ရှယျပွီး လှူဒါနျးမှုတှကေိုဆကျတိုကျပွုလုပျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ပရဟိတမငျးသမီးလေးဆိုတဲ့အတိုငျး နာမညျနဲ့လိုကျအောငျကို ပရဟိတ စိတျအပွညျ့အယရှိတဲ့အတှကျ သူမကို ပရိတျသတျ တှကေ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ လေးစားရငျးအခဈြတှပေိုနကွေတာပဲဖွဈပါတယျနျော..။
ဒီကနေ့ မှာဆိုရငျလညျး ခိုငျနှငျးဝကေ ဆနျ၊ဆီ၊ကွကျသှနျစတဲ့ စားသောကျကုနျပစ်စညျးတှကေို အနှေးယာဉျအစီး (၃၀)အား လှူဒါနျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ.။” ဆိုကျကား အစီး (၃၀) အား ဆနျ(၅)ပွညျ၊ ဆီ(၅၀)သား၊ ကွကျသှနျ၊အာလူး၊ငါးခွောကျ၊ဂျေါဖီထုပျ၊အားဆေး တို့ကို ဝမြှေ လှူဒါနျးပေးခဲ့ပါတယျရှငျ..ဂဟော အတှကျ ဝယျစု ထားတဲ့ ပစ်စညျးမြားနှငျ့ အလှူရှငျမြား လာရောကျလှူဒါနျးထားသော ပစ်စညျမြားအား ရှိသလောကျ ထုတျ၍ ပွနျလညျလှူဒါနျးပေးသှားပါမညျ.
.ခုနှဈရကျ သားသမီး အလှူရှငျမြား အားလုံး ထပျတူ ကုသိုလျပှား မြားနိုငျကွပါစရှေငျ…🙏🙏🙏….” ဆိုပွီး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနတေဆငျ့ ပရိတျသတျ ကိုပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ.။ခုလိုအခကျအခဲ ဖွဈနကွေတဲ့ သူတှကေို လှူဒါနျးပေေးနတဲ့ခိုငျနှငျးဝကေို တကယျကိုလေးစားမိတာကွောငျ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျ ဝမြှေပေးလိုကျတာ ပဲဖွဈပါတယျနျော..။ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကို အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။
သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်ကာ တရားရိပ်သာ မှာအေးချမ်းစွာ ကုသိုလ်ယူနေတဲ့ လူရွှင်တော် ကြာစိ…